रूटोस्टको स्क्र्याप पछि रक्तस्राव पछि रक्तपोषण ग्लोज मो हेबुकाआ शहरी प्यूलक्लिनिक सहित
स्क्र्यापिंग सरल शब्दहरू सफाई हो जससँग धेरै महिलाहरू जिज्ञासामीमा फेला पर्दछन्। सबैजनालाई बुझिएन कि यो यस प्रक्रियाको लागि के हो र यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझिन्छ।
तर अर्कोतर्फ, यो एकदम स्पष्ट छ कि तिनीहरू किन गर्छन् र यो हुन्छ। यो भन्न असम्भव छ कि यो खतरनाक कार्य हो, तर यसले लाभ ल्याउँदैन।
प्रक्रिया के हो
महिलाले गर्भाशय एक मांसपेशि सदस्य हो, नाशपाती हेराई जस्तै। Cervix र योनी को मद्दत संग, गुहा बाह्य वातावरण संग कुराकानी गर्दछ। यो गुफामा छ जुन फल निषेधा पछि फलहरू विकास र बढ्दैछ।
गर्भाशय गुहा एक विशेष श्वेत झिल्ली द्वारा सुरक्षित छ - एर्मिट्रिपुल। यस्तो सुरक्षा पहिले नै निषेचित अण्डाहरूमा संलग्न गर्न सक्षम छ, जसले बच्चाको विकास र जीवनको तत्काल सुरूवात दिन्छ।
यदि सम्पूर्ण मासिक धर्मको लागि निषेचन देखा पर्दैन, एनेमेमेट्रियम परिवर्तनहरू र अन्तमा त्यस्तै तरीकाले परिवर्तन हुँदैन जुन हामी मासिक कल गर्दछौं।
त्यसोभए, प्रत्येक चक्रको साथ यो श्वास झिल्ली बढ्दै जान्छ, यो बाहिर जान्छ, जसको परिणामस्वरूप, जसको परिणामस्वरूप त रक्तस्राव हुन्छ।
जब एर्मामेट्रियम स्क्र्यापियम खोल्दा, पूरै तह हटाइएको छैन, तर केवल माथिल्लो। केहि समय पछि, यो फेरि अपडेट हुन्छ र प्रकार्य जारी गर्दछ - बढ्छ र बाहिर जान्छ।
सफा गर्दै म्यूकोसालाई सम्भव हुनु भन्दा पहिले ठ्याक्कै हटाइन्छ, जस पछि त्यहाँ एक अपडेट र प्रजनन छ र महिला अंगहरूको प्रजनन छ।
<< p> सबै सामग्रीहरू विश्लेषणको रूपमा थप परीक्षाको लागि पठाइन्छ। यो ध्यान दिन लायक छ कि प्रक्रिया को समयमा, रगत जानु हुँदैन।
मासिक धर्मको पछि आउने सामान्य वा प्याथोलोजीको उपस्थितिको बारेमा सोच्ने कारण आदर्शता हो कि होइन। प्रायः, महिलाहरूले रगतलगायत बिभिन्न डिस्चार्जको समस्याको सामना गर्छन्। एक महिलाको स्वास्थ्यको बारेमा रगत "मजायाया" भन्न सक्छ?
रगत चयव के हो?
रंगको बावजुद, पोस्टेनरन्ट अवधिमा निरन्तर प्रशस्त डिस्चार्जहरूको साथ, डाक्टरको यात्रा आवश्यक छ। किनकि सायद तपाईंले रक्तस्राव सुरु गर्नुभयो।
विभिन्न तीव्रताका साथ रक्तस्राव केहि कारणहरूको संख्याको कारण हुन सक्छ। बाह्य र आन्तरिक कारकहरूलाई विचार गर्नुहोस् मासिक धर्मको अन्त पछि अडिनुलोक सराज्यको कारण।
रक्त डिस्चार्जलाई पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ यदि सर्पिल वा महिला हार्मोनल गर्भनिरोधी लिइरहेको छ भने।
यदि अज्ञात रगत स्रावको बाहेक, एक महिलाले कडा दुखाई महसुस गरेमा सचेत गर्न आवश्यक छ, एक महिलाले कडा दुखाइ महसुस गर्छन्। यहाँ अनुपयुक्त छ, जस्तो कि यसले बिरामीको अवस्थाको धैर्य गर्न सक्छ। तसर्थ, परम्परागत औषधि को उपयोग छोड्नु, आवश्यक परीक्षा र नियुक्ति पछि, डाक्टरको सबै दिशा निर्देशनहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
रक्तक्षेपणको साथ रक्तक्षेपण पछि रक्तक्षेपणको जरामा निर्भर गर्दछ रक्त स्रावको उपस्थितिलाई आर्जन गर्दछ।
बच्चा जन्म पछि, एक जवान आमाको जीवन बच्चाको वरिपरि घुमाउन थाल्छ। नयाँ सरोकार र समय को उत्तरदायित्व प्राय: मात्र बाँकी हुँदैन। यसैबीच, कमिनो स्वास्थ्यको लागि ध्यान ध्यान आवश्यक छ। आउनुहोस्, बच्चाको कस्ता कारणहरूको बारेमा छलफल गरौं के कारणहरूले डाक्टरलाई अपील गर्नु पर्छ।
को अभावमा, रगतको कोस्चाली प्रणालीको सामान्य राज्य र अत्यधिक कटौतीले जन्म पछि एक महिना र एक महिलालाई अलग्ग पार्नुभयो।
<< p> वर्णन गरिएको परिदृश्यबाट कुनै पनि विचलन डाक्टरलाई अपील गर्ने एक कारण हो, अर्थात् सद्भाविक "वर्षा, र डिस्चार्ज को एक असामान्य द्वेषपूर्ण गन्ध वा रंग - हरियो वा हरियो पहेंलो।
<< p> एकै समयमा, रक्तस्रावको कारण स्थिति हुनसक्दछ जब एन्डोमेट्रिममा संलग्न गरिएको प्लेसाइका अवशेषहरू (गर्भाशयको आन्तरिक तह) छन्। यस्तो अवस्थामा, एक अल्ट्राससाउन्ड अध्ययन निवास गर्न प्रयोग गरिन्छ, विश्वासको पुष्टि गर्न अस्पताललाई आवश्यक छ। उपचार विधिले गर्भाशय गुहा र ड्रग्सको उद्देश्य हो जुन कटौती कार्य गर्दछ।
निवृत्तिभरी, अप्रिय गन्धको पहेंलो वा पहेंलो छाया - गर्भाशयको श्वेत झिल्लीको संक्रमण हो। यी लक्षणहरूमा समानान्तर, पीडा तल्लो पेट, तापमान वृद्धि, चिल मा देखा पर्न सक्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, यो निदान र उपचारलाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ, किनकि Alometrentrentritrit ले निम्न गर्भधारणको साथ अशक्त र उपकरणको उपकरणको उपकरणको लागि कठिनाई गर्न सक्दछ।
गन्ध बिना पारदर्शी टेक्क्ट सिक्ल। Ovulation भन्दा पहिले।
ब्लेन्टेड क्रीम आकारको स्थिरता, चक्र को बीचमा स्नातक र अन्त प्रलोभन। / LI>
स्कार्फल मेजर चयन। मासिक धर्मको पहिलो दिनहरू।
खैरो चयन। मासिक धर्मको अन्त। / LI>
पहेंलो बाक्लो मोटो विलाप। असुरक्षित यौन पछि। / LI>
सेतो र colors ्ग-जस्तो हाइलाइटहरू। योनीमा आसालीन नभन सेक्स पछि। / LI>
तरल दुध चयन। गर्भावस्था।
गुलाबी सिलहरू। बच्चा जन्माएपछि। / LI>
आक्रोशित केटीहरू, नौसिल यौन जीवन, धेरै अशिष्ट रूपमा उनीहरूको महिला स्वास्थ्यको हो। निस्सन्देह, यो दृष्टिकोण प्रोत्साहनको लागि योग्य छ। योणि विनियोजन मासिक धर्मको समयमा हुँदैन। तिनीहरूको कुनै पनि नम्बर एक जवान केटीसँग डराउन सकिन्छ। त्यसकारण अनावश्यक चिन्ता र झूटा आतंकबाट बच्नका लागि केटीहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् कि कुन सबैलाई आमूल मानिन्छ भनेर जान्नका लागि केटीहरू यति महत्त्वपूर्ण छन्, र ती हुन्।
यौवन पुगेको महिलाको माइक्रोफारु निरन्तर सक्रिय र निरन्तर विनियोजन गर्दछ। यस अवस्थामा, र color, स्थिरता र चक्जरमा अवधिमा परिवर्तनको संख्या। निम्न सेक्सनलाई सामान्य मानिन्छ:
<< p> तरल र पानी इन्धन गन्ध बिना, जसले थकित र असुविधाको कारण गर्दैन, सामान्य मानिन्छ। सेतो बाक्लो डिस्चार्ज, मिठाईहरू जस्तो मिठाईहरू जुन अप्रिय संवेदनाहरूको साथमा छैन - यो एक बिल्कुल सामान्य घटना हो।
तुरून्त डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
मसँग यो भयो, यो शब्द तपाईको भन्दा अलि बढी थियो! मसँग प्लेसेन्टाको सानो टुक्रा थियो, यो गर्भावस्था रोक्न सक्ने खतरा हो! तुरुन्त डाक्टरकहाँ जानुहोस्! सेतो बाहेक कुनै पनि डिस्चार्ज, अवरोधको खतराको बारेमा कुरा गर्दैछ! यो सेक्स मात्र होइन, तर तौल, तनाव र उच्च शारीरिक परिश्रम ल्याउन सक्छ!
तपाईंसँग क्षति छ? यो एक सानो जोडी हुन सक्छ। म पहिलो बीमा पहिलो थियो, सत्य 36 36 कतै हप्ता हो। डराएर डरायो। आमाले भने। र उनले सोध्यो कि त्यहाँ उसको लोग्नेसँग केहि थियो। सामान्यतया, क्षरण थोरै हराएको छ। र यो केवल ड्रपहरूको एक जोडी हो र अब दोहोरिदैन
र मैले मेरो पतिलाई 10 हप्तामा मेरो जन्मदिनमा मनाए। मनाउनु भएको छ किनभने डाक्टरले निषेध गरेको र डरलाग्दो थियो। मलाई कुनै पीडा महसुस भएन, तर यौन म रक्तस्राव गर्न थालेपछि मैले तुरुन्तै अस्पतालमा फस्टायो। अस्पतालमा उनीहरूले भने कि टुक्राहरू थिएनन्, क्यारी फुट्न सकिन्छ। अब मैले बिर्सें कि के सेक्स, यद्यपि म वास्तवमै चाहान्छु)))))))
योनीबाट डिस्चार्ज प्राकृतिक हुन सक्छ, वा संक्रमणको कारण योनी (भिजिनटिस) को उल्लंघनको परिणामको रूपमा हुन सक्छ। जननेंद्रियको क्षेत्र (भल) को योनी प्वालको वरिपरि एक क्षेत्र हो - साथै प्रसारण हुन सक्छ।
चयनको कारणमा निर्भर गर्दछ, अन्य लक्षणहरू प्राय: अवलोकन गरिन्छ। तिनीहरूमा थपिंग, जलाउने, जलन, रातोपन, र कहिलेकाँही पेशाब र यौन संभोग गर्दा दु: ख समावेश गर्दछ।
योनिन्त डिस्चाराको कारण ईस्ट्रोजेनको स्तरमा प्राकृतिक परिवर्तनको हुन सक्छ। जब स्तर उच्च छ, एस्ट्रोजन गोप्य (बलगम) लाई विकास गर्न प्रोत्साहित गर्दछ र थोरै रकम योनीबाट जारी गर्न सकिन्छ। एस्ट्रोजन स्तरहरू निम्न केसहरूमा उन्नत हुन्छन्:
नवजात केटीहरू एक वा दुई हप्ताको लागि जन्मको लागि जन्मेको बच्चाको लागि जन्मेको छ, किनकि एस्ट्रोजन आमाबाट जन्मनु भन्दा पहिले आमाबाट अवशोषित हुन्छ - / p p>:
हरेक महिलाले विभिन्न प्रकारका स्रावबाट सामना गर्दछ। केही डिस्चार्ज पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ, अरूले समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्छन्। र color पारदर्शी पारदर्शीबाट गाढा खैरो देखि फरक हुन्छ। यौन संभोग पछि चक-गुलाबी डिस्चार्जहरू छन्, चयन उत्पन्न भयो वा डराउँछ, यो सबै तिनीहरूको मात्रामा निर्भर गर्दछ र अवधिमा निर्भर गर्दछ।
विभिन्न र colors ्गको योनी विनियोजनहरू - परिणाम स्वरूप तिनीहरू देखा पर्न सक्छन्
योनीको भित्री भाग सपाट उपपियमको श्वेत्तर तहसँग लाइन लगाइएको छ। यहाँ योनी भित्र ग्रन्थीहरू छन्, धन्यबाद, धन्यबाद, जुनसुकै बलगम प्रतिस्थापित गरियो। बलगमको एक विशेष अम्लवादी गन्ध छ र लाक्टिक एसिडको उपस्थितिको कारण कमजोर एसिडिक माध्यम छ।
यौन, जेनिक र अन्य कार्यहरू थपिएको, योनीसँग एक सुरक्षा र आउटपुट प्रकार्य छ। सामान्यतया, प्राय: सामान्य यी प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्धित छन्।
सामान्य रूपमा, सामान्यतया पारदर्शी, सेतो वा हल्का पहेंलो, सजावषहिकता, प्रशस्त छैन। चयनको प्रकृति मासिक धर्मको दिनमा निर्भर गर्दछ।
महिलामा जननाद्वीय अंगहरूको स befor ्ख्या प्राय: कुनै खुलासाको साथ हुन्छ, तर सामान्यतया अन्य लक्षणहरू पनि उपस्थित हुन्छन्।
गर्भावस्थाको क्रममा, कुनै पनि ध्यान दिनुहोस्, कहिलेकाँही गर्भावस्थाको बखत डिस्चार्ज खतरनाक छैन। कुनै पनि रक्तस्राव, यौन संभोग पछि गुलाबी डिस्चार्जहरू गोलकीय गोलकीपरको कारण हुनुपर्दछ।
रोगहरूको सूची जुन माथिका लक्षणहरूको उपस्थितिमा एक डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ, तपाईं एक चिकित्सकसँग भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ।
कुकुरमा एक्लोसन सधैं कुनै पनि रोगको संकेत हुँदैन। कहिलेकाँही शारीरिक वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गरिन्छ र कुनै खतरा प्रतिनिधित्व गर्दैन। यद्यपि यो रोगीलाई आदर्शता छुट्याउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ ताकि त्यो रोगका पहिलो संकेतहरूमा यसको उपचार सुरु हुन्छ।
मालिकलाई आफैंको अवस्था कस्तो छ भनेर निर्धारण गर्न गाह्रो छ। तसर्थ, यदि कुनै श doubt ्का, हाम्रो पक्षका लागि पशु चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, जसले सही निदान दिनेछ।
यदि छनौट यस्तो गम्भीर बिरामीको लक्षण हो, जस्तै पिसोमीटर, तब शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप बिना नै नगर्नुहोस्।
BOPPS बाट कुकुरहरू
केहि केसहरूमा, तिनीहरू डेलिभरी पछि ब्राउनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर भारी पाउने डिस्चार्जले गम्भीर उपचारको आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईंको कुकुरको स्थायी विनियोजन गर्दछ भने, तपाइँ पर्खनु हुँदैन, हाम्रो पशु चिकित्सा क्लिनिक हाम्रो पशु चिकित्सा क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्न भन्नु राम्रो हुन्छ। केवल एक अनुभवी डाक्टरले डिस्चार्ज र कुकुरको कारण के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर फेला पार्न सक्षम हुनेछ, र त्यसपछिको प्रभावकारिता उचित उपचार सञ्चालन गर्नुहोस्।
लूपबाट कुकुरको कारणहरू
प्रवाहको बृद्धिबाट कुकुरहरूको एक्लोपनाले वा बच्चा जन्माए पछि धेरै सामान्य मानिन्छ, अवश्य पनि, यदि तिनीहरू प्रचुर मात्रामा छैनन् भने। यद्यपि, ध्यान पानीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, कमै डिस्चार्ज र प्रशस्त रक्तपात। डिस्चार्जका कारणहरू हँटलाबाट क्यान्सरबाट स from ्कट हुन सक्छन्।
कुकुरकालीन अधिवेशनको मामिलामा पशु चिकित्सक निरीक्षणको आवश्यक पर्दछ, उदाहरणका लागि, तापक्रम वा कमजोरी।
रक्त चयन भनेको योनीबाट मध्यान्हरको बीचमा रगतको रगतको आउटपुट हो। धेरै महिलाहरूका लागि यो एकदम सामान्य घटना हो र शासनको रूपमा, चिन्ताको कारण होइन। जे होस्, यो जान्न उपयोगी छ कि यसले त्यस्ता डिस्चार्ज गर्दछ र कुन अवस्थामा उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।
नियमको रूपमा रक्तस्राव खतरनाक छैन र चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन। तर केहि केसहरूमा सर्वेक्षण वा उपचार हुन सक्छ।
प्रति दिन खूनी लोडहरूसँग मिल्दोजुल्दो चीजले प्रति दिन मिसाइन्छ जब तपाईंले अवधिहरू सुरू गर्नुपर्दछ? हुनसक्छ यो रगत बगिरहेको छैन, तर तपाईंको मासिक रक्तस्रावको सुरूवात।
कहिलेकाँही मासिक धर्मबाट रक्तस्राव छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यद्यपि, मासिक रक्तस्राव र रक्तस्राव बीच केहि भिन्नताहरू छन्।
मासिकालल रगत बिभिन्न र colors ्गहरू हुन्: रातोबाट गाढा खैरोमा। मासिक धर्मको अन्त्य सम्म, उनी लगभग कालो बन्न सक्छिन्। यदि रक्तस्राव प्रशस्त छ र रगत जलेको छ (सुन्तला रंगको साथ चम्किलो रातो), तपाईंले एक डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ।
रक्त चयन अभाव छ र छोटो रक्तस्राव (1-2 दिन), मासिक धर्मको रूपमा प्रशस्त छैन। यस्तो रक्तस्रावको साथ क्लोटहरूको गम्भीर दुखाइ वा चयनको साथ हुनु हुँदैन। रक्त रक्त रंग हल्का खैरो देखि गुलाबी मा फरक हुन्छ।
रक्त चयन अक्सर चक्रको बीचमा हुन्छ, र त्यसपछि तिनीहरू प्राय: ओभिलेशनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यद्यपि कहिलेकाँही तपाईंको शरीरमा कुनै पनि अन्य परिवर्तनको बारेमा रक्तस्राव हुन्छ। सामान्य विकल्प मासिक धर्मको लगत्तै रक्तस्राव हुन सक्छ।